Blog Etourism - Etourism
ele niileAkụkọ EtourismNdụ LifeNjem ya na EtourismOzi njem
Họchaa site na ụbọchịHọchaa aha ha
Ihe Omume Sọlọmọn Na-eme na Seoul
Ozi njemHapụ ikwu
Ọ bụrụ n ’ịnọ na Seoul ma ọ bụrụ na ị garala ebe niile ịchọrọ ịga, nke a bụ blog nke ga-enye gị echiche ọhụrụ nke ebe ị ga-eleta na ihe omume dị jụụ ị ga-eme!
Seoul bụchaghị ụdị obodo ị na-adọgbu onwe gị, na Kama ị ga - ahụ ihe na-atọ ụtọ ịme oge niile dabere na ọnọdụ gị. Yabụ ebe a bụ ụfọdụ echiche ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eme na ngwụsị izu ọzọ!
Restaurantslọ oriri na ọlụ Halaụ Halal na Seoul
Ọ bụrụ na ị na-abịa Seoul ma na-achọ ụlọ oriri na ọ friendlyụ -ụ oriri na ọ halaụ halaụ halal, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị! Na blọọgụ a, ị ga-ahụ adreesị dị iche iche nke ụlọ oriri na ọ Halaụ Halaụ Halal dị na Seoul, site na nri ọdịnala ezigbo Korea na nri India na Turkish.
Restaurantlọ oriri na ọlụ Halaụ Halal dị na Itaewon, ógbè ọdịnala, mana ọbụghị naanị! Enwere ụlọ nri ndị ọzọ dị na halal na Gangnam na Hongdae dịka ọmụmaatụ.
Royal's Seoul: Ihe nketa dị oke ọnụ ahịa
Mgbe ị bịarutere Seoul ihe mbụ ịchọrọ ịhụ bụ doro anya otu n’ime obí eze ndị ahụ mara mma. N’ezie, e nwere ihe karịrị otu obí n’isi obodo, onye ọ bụla nwere akụkọ ihe mere eme ya na iji ya eme ihe. Akụkụ kachasị mma bụ na ị nwere ike iyi akwa ọdịnala gaa leta obí eze na ụfọdụ n'ime ha kwere ka ị banye n'efu ma ọ bụrụ na ị na-eyi Hanbok. N'ezie enwere ọtụtụ ụlọ ahịa mgbazinye maka Hanboks dị nso na obí eze, maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka, ma ha nwere ọnụ.
Ka anyị gaa ileta Royal Palaces nke Seoul, ihe nketa dị oke ọnụ ahịa Korea.
Olọ Ọrụ Seoul Agaghị Echefu
Seoul bara ezigbo ụba na akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na nka. Nwere ike ịchọta ihe ngosi dị iche iche na-atọ ụtọ afọ niile. Enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie na obodo Seoul nke ị nwere ike inwe obi mgbawa… Nke a bụ isiokwu ga-egosi gị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ị ga-aga njem mbụ mgbe ị gara Seoul: umslọ ihe ngosi nka Seoul agaghị echefu gị.
Top 5 nri Korea
Top 5 Oriri nri Korea Kedụ nri ise a ma ama na Korea? A maara nri Korea dị mma ma na-enye ọtụtụ nhọrọ. Ihe ụtọ dị iche iche, agba dị iche iche, ihe a na-ahụ anya, ihe niile na-adọrọ adọrọ ma ihe ịchọrọ ime bụ ịnwale efere niile ị hụrụ! Nke a bụ…
Ebe A Na-ekpo ọkụ na Seoul
Ebe A Na-ekpo Egwu na Seoul Ebe aga na ihe ị ga-eme? Eleghị anya ị maara aha Itaewon, Myeongdong ma ọ bụ Hongdae, mana ị maara n'ezie ụdị ihe ị ga - eme na mpaghara ndị a. Will ga - ahụ na nkọwa blog na mmemme nke ndị a ma ama na…
Eziokwu iri gbasara South Korea
Eziokwu 10 kachasị elu banyere Korea: enwere ike iju gị anya mgbe ị gụsịrị isiokwu a! Eziokwu 1: Iwu ije na South Korea amachibidoro ịgafe okporo ụzọ ọbụlagodi na ụgbọ ala adịghị. Ọ bụrụhaala na ìhè dị n'ụkwụ na-acha ọbara ọbara, ịgaghị agafe ụzọ, ma ọ bụ ịnwere ike ịnweta…
Ga-enwerịrị égwu na South Korea
You na-eme atụmatụ ịbịa Korea n'ụbọchị ndị na-abịa? Mgbe ahụ, e mere post a maka gị! Ndị a bụ ụfọdụ ngwa ịchọrọ ibudata tupu ị bịarute Korea iji nwee ọ enjoyụ na njem gị nke zuru oke! Ndị a ngwa ọdịnala ga-azọpụta gị oge dị ukwuu ma mee ka…
Usoro mmụta Korea: N'okporo ụzọ Dramas Korean a ma ama
Onye ọ bụla riri egwu K-Drama agaghị abịa na Seoul na-enweghị iji nlegharị anya gaa ma ọ dịkarịa ala otu ihe ndị a. N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị chọpụtara Korea site na k-dramas, n'azụ nyocha anyị, na -rọ nrọ ileta ebe ndị ahụ niile otu ụbọchị… Dịka ị siri hụ,, a na-agba ọtụtụ ihe nkiri k-nkiri na ebe ndị njem dị egwu, na ụdị dị iche iche, site na…
Oge njem Korea na Oge mgbụsị akwụkwọ
Ka anyi Choputa Korea n’oge mgbụsị akwụkwọ! N'oge mgbụsị akwụkwọ dị na South Korea, akwụkwọ ya na-achazi mma ma na-acha ka anyị na-anabata oge oyi ma ọ bụ udu mmiri. Oge njem njegharị Korea kacha mma n'oge mgbụsị akwụkwọ, ka m gosipụtara gị ya! 1bọchị XNUMX - Seoul Gyeongbokgung Obí Gyeongbokgung pụtara nke “Eluigwe goziri site na nke ọma” bụ ihe ama ama…
Oge njem Korea na Oge Ezumike
Ka anyi Choputa Korea na udu mmiri! Oge ọkọchị na South Korea dị ezigbo ọkụ! Ọ bụ ihu igwe dị mma nke na-adị 30 Celsius C site na June ruo August. Ka anyi choo uzo anyi ga eleta obodo anyi ma nwekwa obi iru ala n’otu oge! Njem njem nlegharị Korea kachasị mma na Oge Ezumike, ka m gosipụtara ya…
Oge njem Korea na Oge opupu ihe ubi
Ka anyi Choputa Korea n’oge opupu ihe ubi! Mgbe oge oyi gasịrị, anyị na-anabata ihu igwe mara mma nke oge opupu ihe ubi, ebe okooko osisi na-enwu gbaa ma na-acha odo odo na obodo dum na-eme nlele mara mma! Oge opupu ihe ubi bụ ezigbo oge nleta South Korea ma lee njem ị nwere ike ịgbaso mgbe ị na-eleta South Korea n'oge a !! Ka ahụ…
Oge njem Korea na oge oyi
Ka anyi Choputa Korea n’oge udu mmiri! Nọvemba, ọnwa Disemba, Jenụwarị na Febụwarị bụ ọnwa oyi nke afọ anaghị etinye oge maka njem. Mana Oge Ochie bu kwa ohere iji nyochaa mbara ala snow. Kedu ihe kpatara na ịgaghị South Korea, mba mepere emepe na Eshia, dịka nhọrọ maka ime njem n'oge Winter ka snow na-agbakwunye…
TOP 5 Ogige ntụrụndụ na Korea
Ebee ka m nwere ike ịga kporie ndụ na Korea? Ọ bụrụ na ị na-ajụ onwe gị ajụjụ a wee chọọ ụzọ ị ga-esi kporie ndụ, ntụrụndụ bụ n'ezie nhọrọ dị ịtụnanya. M ga-egosi gị ụfọdụ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere oge, kedu maka ịga ụfọdụ n'ime ha? Nwere olile anya na ị ga - enweta “TOP 5…
Ebe obibi Ecotourism: 8 Ebe iji gbaa Ezọ njem gị dị na Seoul
Love hụrụ okike n'anya na njem? Ecotourism bu uzo eji eme njem nke na egosi nsopuru n’ebe uwa di, ma odighi enye aka njo ya. Ọ bụ maka ndị njem ahụ na-echegbu onwe ha banyere gburugburu ebe obibi na nchedo ya. Korea adịghị elekọtị anya nke ọma ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere obodo ndị ọzọ, mana mba ahụ na-emekwuwanye…
Ma Vie Coréenne [Visite et ogbo de 6 mois en Corée du Sud]
Ndụ LifeHapụ ikwu
Kedu ihe bụ? Je suis une étudiante effectuant en ogbo en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pay pi me passionne depuis une dizaine d'années maintenant. Cela a bien-sûr commencé par la musique coréenne ou au travers de différents groupes musicaux j'ai pu découvrir la langue coréenne, puis les gories coréennes qui…
Ndụ Korea m [nleta na ọnwa isii na South Korea]
Onye ka m bu? Abụ m nwa akwụkwọ na-eme ihe ọmụmụ na South Korea, mba nke masịrị m nke nta karịa afọ iri ugbu a. Lovehụnanya m nwere maka obodo a ebidowo na egwu Korea ebe ọ bụ na n'egwú dị iche iche m nwee ike ịchọpụta asụsụ Korean, mgbe ahụ usoro usoro Korea…
Helọ oriri na ọ Restauranụ 5ụ XNUMX ụlọ oriri na ọ Loụ eụ e Locais de Filmagem (Esemokwu ARMY)
O número de ARMY no mundo todo está crescendo cada vez mais. Dentre os muitos sonhos de uma ARMY, gaa a Coréia está com toda certeza no TOP 3. Depois de um dia visitando os incríveis lugares que a Coréia tem para oferecer, você provavelvente vai precisa de um descanso, certo? Restauran nwere ike…
5 Ga-eleta Restaurantslọ oriri na ọ Filụ andụ na Ọnọdụ filming (ARMY Edition)
Ọnụ ọgụgụ ARMY gburugburu ụwa na-abawanye mgbe niile, na n'etiti ọtụtụ nrọ ha nwere ike ịchọ imezu dị ka ARMY, ịga Korea bụ n'ezie na TOP 3. Mgbe ụbọchị ị gara ebe ndị mara mma Korea ga-enye, ị nwere ike ịchọrọ gbarie, nri? Kedu maka ụlọ oriri ma ọ bụ ụlọ ahịa kọfị?…
Afọ Ọhụrụ: Ihe 5 ị ga-eme na South Korea
Afọ Ọhụrụ: Ihe ị ga-eme na South Korea be ga-anọ na South Korea ime ememme Afọ Ọhụrụ? Nke a bụ 5 ihe ị ga-eme iji nwee ọ enjoyụ na afọ a na gburugburu ụwa nke na-anọchite anya ọtụtụ mmadụ, mmeghari ohuru, ụzọ ịhapụ ịhapụ ihe ọjọọ niile ị na-echeta site n'oge gara aga…
Top 3 Ice Rinks maka Skating na Seoul
1. Lotte World Ice Rink Adreesị: 240, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul 'Lotte World' bụ ogige ntụrụndụ ime ụlọ + na ihe karịrị iri anọ dị na obodo Seoul. A na-eme usoro ngosi ụbọchị, nke a na-eme ugboro abụọ n'ụbọchị, na arụmọrụ dị iche iche n'ime ogige ahụ na-ewetara nnukwu igwe mmadụ n'afọ niile. Enwere ice rink n'ime ntụrụndụ…
Kedu ụgbọ ala maka mbufe gị na South Korea?
Na-abia n’ìgwè ma gbaa akwụkwọ ịnyefe ọrụ? Site na oche oche oche nke 45 ruo n'ụgbọ njem ndị njem nke 7, lee, ụdị ụgbọ ala dị iche iche ị nwere ike ịtụ anya dabere na ọnụọgụ ndị njem. Xian nke ụwa 45 seater bus Kia Grandbird 45 seater Hyundai mpaghara 25 oche ụgbọ ala starex 11 oche 8 / 10…
BTS agbapụ ebe
Ka anyị soro ụkwụ BTS! BTS nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịtụnanya n'ụwa niile. Otu Kpop a (korean pop) emeriala ọtụtụ Korea na ụwa. Kpop maara nnukwu ụlọ ọrụ na-enye vidiyo egwu egwu, mmemme telivishọn na ndị na-abụ abụ ma jikọtara ọba na foto ndị ọzọ na…
Nkwụghachi ego ụtụ na Korea
Amaara na ị nwere ike nweta nkwụghachi ụtụ na South Korea? Dị ka n'ọtụtụ mba, enwere ike ịnweta nkwụghachi ego tupu ịhapụ obodo. Dịka mba dị mkpa ịzụ ahịa, South Korea enweghị ike ịbụ ihe dị iche na ihe ụwa dum. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ na mba. Onye bu…
Oke ihe ncheta nke 3 na Seoul
1. Adreesị Shoplọ Ahịa slọ Ọrụ Charm & Charm: 306, Dongmak-ro, Mapo-gu, Seoul Subway: Gongdeok Station (Line 5, 6), Wepụ 1, ije 5-7 min Product: Cosmetics Discoun Coupon: https: //www.koreaetour .com / ngwaahịa / amara-amara-ịchọ mma-shop-discount-coupon / Alaka Seoul nke Charm & Charm bụ nnukwu aha-ahịa, ụlọ ahịa ụtụ-nkwụghachi ụgwọ dị n'akụkụ mpaghara Hongdae, nke na-eso ndị na-eto eto mgbe niile. Storelọ ahịa ahụ na-enye n'elu…
Enweela ike ịhụ na ụfọdụ ngwugwu ị ga-eyi uwe ejiji ọdịnala Korea: han hanbok. Mgbazinye Hanbok abụrụla ezigbo azụmahịa ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị njem (ndị ala ọzọ na ndị Korea) na ọbụna ndị bi na Seoul nwere mmasị na-etinye otu maka awa ole na ole. Enwere m ihe ịma aka iyi ya maka…
Ebe kacha mma ịnụ ụtọ mgbụsị akwụkwọ na South Korea
Oge kachasị mma ileta South Korea bụ oge mgbụsị akwụkwọ. N’ebe nile n’ala osisi na-ewere ọmarịcha ụbịa ha mara mma, ebe ndị a bụ ụfọdụ n’ime anwansi na ebe ndị mara mma na-apụta. Red, oroma, aja aja, odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe a bụ ebe kachasị mma iji nwee mmasị na akwụkwọ nke oge a dị ịtụnanya ma jupụta isi gị…
Ememe Halloween na Seoul
Halloween na-abịa! Oge erugo ikiri ihe egwu dị egwu mgbe ị na-eri pop-ọka, kpọchiri akpọchi ọnụ ụzọ gị ma na-atụ egwu na ha agaghị abụ mmụọ ma ọ bụ zombie na-anwa ịbanye… ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-abata na Seoul maka ihe omume a, ikekwe ị nwere ike inwe obi ike, tinye nke gị ekike Halloween kacha mma, tinye ụfọdụ etemeete ma nwee obi ụtọ n'ihe niile…
Njem Oge A na-abịa [njem ezumike ezinụlọ na ndịda korea]
Plans nwere atumatu ọ bụla n’ime ọnwa Disemba? Kedu maka ibia site na 4th gaa na 8 nke ọnwa iji nwee ọmarịcha njem nke ga - eme ka ị nwee ike ịchọpụta ebe ụfọdụ zuru oke iji nwee obi ụtọ n'oge oyi Korea. N'etiti nchọpụta, ntụrụndụ na izu ike, ka anyị bido ọnwa n'ụzọ dị mma ma nweta ụfọdụ…
Udiri nri rue: gini?
La corée du Sud est un akwụ où vous trouverez l'une des meilleures nourritures de rue au monde. Elle est d'illeurs devenue très populaire na vous pouvez y trouver de nombreux guzo na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ laụ. Salée, sucrée ou gbaa ume épicée, les nombreuse saveurs que vous découvrirez raviront toges les papilles. Laissez-moi vous présenter ụfọdụ…
Nri okporo ụzọ: kedu ihe ị ga-eri?
South Korea bụ obodo ị ga - achọta otu n'ime nri nri n'okporo ụzọ kachasị mma n'ụwa. A na - ewu nri n'okporo ámá na - ewu ewu ma ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ụdị nri a. Nnu nnu, nke dị ụtọ ma ọ bụ oseose, ọtụtụ nri ị ga-ahụ n’ebe ahụ ga-adaba na papilla ọ bụla. Ka m gosi gị…
0011: Hipster en mission! [forfait wunye Hipsters en Coree]
Hipster, vous avez une mission: réussir les 11 défis que vous allez recevoir. Parviendrez- vous à y bịarute tout en faisant du tourisme et en passant du bon temps ou… échouerez-vous? Vous avez 5 egwuregwu. Bonne ohere, nous comptons sur vous! Njem 1 - Mission 1 Bienvenu à Nami Island Nami Island…
0011: Hipster na Mission! [hipsters njem njegharị na ndịda korea]
Hipster, ị nwetara ozi: ịga nke ọma maka ọrụ nke 11 anyị ga-enye gị. Ga - ejikwa ya mee ihe ị na - elegharị anya ma na - ekpori ndụ gị ma ọ bụ na ị ga - akụ afọ n'ala. Have nwere ụbọchị 5. Jisie ike, anyi tukwasiri anyi obi. Day 1 - Mission 1 Nnabata na Nami Island Nami…
Oke 6 Soju Fla Fla
Mkpụrụ Flavored Korea Soju 1. Yuja (Tangerine) Yuja ekpomeekpo bụ mkpụrụ izizi soju nwere mkpụrụ nke na-eduga n'imi mkpụrụ osisi soju. Ọtụtụ ndị Korea na-emegburu onwe ha maka ‘Sunhari’, ọkachasị ụmụ agbọghọ. Yuja bụ ụdị citrus dị ụtọ nke ukwuu na ihe ilu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe…
vous êtes akwụkwọ ịkpọ òkù wụsara votre lune de miel! [forfait wunye amoureux en Coree]
Oké nsogbu? Pourquoi ne passeriez-vous pas votre lune de miel ici, en Corée du Sud? Laissez-moi vous montrer d'agréables lieux où vous et votre partenaire créeraient d'incroyables souvenirs. Geslọ plage, jardins, ọdịnala ọdịnala na nke oge a, la Corée du Sud plaira à tous les heureux mariés qui souhaiteraient découvrir la belle…
Anyị na-akpọ gị oku maka izu ụtọ gị
Just luola di? Kedụ ka ị ga-esi nweta ezumike ụtụtụ gị ebe a, na South Korea? Ka m gosi gị ebe dị mma ebe gị na onye gị na ya ga -eme ihe ncheta dị ịtụnanya. N'agbata osimiri, ubi, mkpụkọ ọdịbendị na ndụ ọgbara ọhụrụ, South Korea ga-adabara ndị amị ọkụ amị ga-achọ ịchọpụta Korea mara mma ma biri…
Kpop ulo oru: 7 jours wunye vous immerger [Forfait wụ kpopers en Coree]
N'avez-vous jamais rêvé de flâner le ogologo de la célèbre K Star road? N'avez-vous jamais rêvé de marcher sur les tra du du plus populaire groupe de Kpop du oge, BTS et de decouvrir leurs villes natales? Vous vous sentez nchegbués? Pourquoi ne pas commencer cet improvable njem ga-enyere gị aka! Oge 1…
Lọ ọrụ Kpop: Xbọchị 7 ka eme onwe gị ka ị ghaa [kpochapụ njem ntụrụndụ na ndịda korea]
You nwetụla mgbe ị rọrọ ije ije na ụzọ K ama ama ama ama? Ọ dịla mgbe ị rọrọ nrọ ịgbaso ụzọ nke K-groupe nke ama ama nke Bent, BTS ma chọpụta ebe obibi ha dị iche iche? Ọ bụrụ na ọ na-ewute gị, kedu maka ịmalite nnukwu njem ugbu a? Day 1 Seoul Airport - nkwari akụ -…
Oge mgbụsị akwụkwọ 3 dị elu na-ahapụ saịtị na Korea
1. Adreesị Ogige Deoksugung: 99, Sejongdaero, Jung-gu, Seoul can nwere ike ịnweta akwụkwọ osisi n'oge mgbụsị akwụkwọ dị egwu na Seoul! Obí Deoksugung bụ otu n’ime obí eze kacha mma Seoul kwesịrị ileta n’ehihie ma ọ bụ n’abali. Deoksugung Obí dị na nkuku ngbala ihie obodo Seoul ma bụrụ onye ama ama maka okporo ụzọ mgbidi ya mara mma. Deoksugung…
Ndị otu Korea sitere na India nwere obi ụtọ na njem ha na Etourism
Njem ya na EtourismHapụ ikwu
Ndị njem nlegharị anya na 100 gara Korea site na India. Otu buru ibu nwere obi ụtọ maka njem ha maka ụbọchị 10 na Etourism Korea. Ndị otu ahụ nwere ọ timeụ dị ukwuu na ọtụtụ obodo Korea na ha niile. Kedu ihe mere na ị gaghị eso ndị otu gị njem na Korea n'ọdịnihu?
Ebee ka ebe egwuregwu ski dị na Korea?
Evertụtala njem nlegharị anya na Korea? Ever nwetụla mgbe ịse egwuregwu? Korea nwere oge anọ, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ sọọsọ n'oge oyi. Mgbe ahụ anyị ga-achọpụta ebe ezumike egwuregwu Korea dị?
Nri oyi nke 6 Korean ị ga-anwale
Nri Korea n’oge oyi 1. Mmanụ a asara n'ọkụ (Gun-Goguma) Achịcha dị ụtọ a cansara n'ọkụ n'ime akpọm, a na-akpọ egbe-goguma (a asara n'ọkụ na-atọ ụtọ). Achịkpọ anụ a potatoara n'ọkụ bụ otu n'ime nri ndị Korea na-ahụkarị. Ọ na-atọ ụtọ ma na-esi isi ọma. You nwere ike ichota anụrị dị ụtọ n'ahịa ebe nri na ụlọ ahịa na mma. 2. Azu azọ azụ (Bungeo-ppang)…
Forfait Famille en Corée wunye egwuregwu 10
Vaczọ ohere ezumike ga-eme ka mmekọrịta chiri anya na nke oge a ga-eme ka mmadụ nwee mmetụta dị egwu. Avez-vous déjà voyagé avec votre famille? Voici l'itinéraire idéal que vous zubariez emprunter / parcourir avec votre famille. Namsangol Hanok Village Jour 1 - Séoul Aéroport - Gyeongbokgung Obí - Nleta Namsan - Village Hanok de Namsangol Tout commence…
Njem ngwungwu ezumike na Korea maka ụbọchị 10
Togethernọnyere ezinụlọ anyị na-eme ka anyị nwee ahụ iru ala na obi ụtọ, have nwere ahụmịhe ọ bụla iji soro ezinụlọ gị gaa? Lee njem a ị ga - enwe na Korea niile ịchọrọ, you chọrọ isonyere anyị? Usoro ihe omume mbụ anyị na-amalite na Seoul. Mee ncheta nke mara mma na itinye Hanbok (uwe ejiji ọdịnala) na Gyeongbokgung Obí. Ọ dịkwa ezigbo mma ịnwale ụfọdụ nri n'okporo ụzọ dị na Namdaemun maka nri abalị gị.
Ọ bụrụ na mmadụ ebughị ihe ọjọọ n'obi, ọ ga-apụta ihe ọ bụla. Incheon Songdo / isi iyi nke KTO (Korea Njem Nleta Koria) Grâce à mes colocataires, j'ai eu la chance de partir wunye na enweghị nsogbu ego na Incheon. Connue wụsara a Premiya aéroport…
Escapezọ mgbapụ dị mma nye Incheon!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe mmetụta dịka nwatakịrị ọzọ ma nweekwa ihe ịtụnanya gbasara gị, ihe Incheon ka emere gị. Incheon Songdo / isi iyi nke KTO (Korea Tourism Organisation) N'ihi ndị mụ na ha bi, enwere m ohere ịga njem na Incheon. Obodo a mara obodo anya maka…
Mmemme Jinhae Cherry wayo: Un songe printanier
Avez-vous déjà vu un ọwara de cerisiers en fleur? Vous êtes-vous imaginé en train de marcher le ogologo d'un ruisseau, porte par le vent et entouré de petals blanc et rose, comme de légers flocons de neige? Ememe otuto Jinhae Cherry (Jinhae Gunhangje ememme) L'esprit des mmemme de cerisiers en fleurs est un doux mélange entre…
Ememe ifuru nke Jinhae Cherry: fantasy nke oge opupu ihe ubi
Everhụla ọwa osisi ifuru? Ka ị rọrọla nrọ ịgagharị n'okirikiri iyi, nke ikuku na-ebufe ya na ifuru na-acha ọcha na pink na-agbakwa gburugburu ya? Ememe ifuru nke Jinhae Cherry (Jinhae Gunhangje ememme) Udiri okpokoro nke udara cherrys bu ihe zuru oke na uri, udo na ebube. Ọ bụ akụkụ nke Asia…
Lọ ọrụ Njem Ndị Korea - Etourism] Etourism lere egwu 'Dike'
Akụkọ EtourismHapụ ikwu
Na 4th Eprel, ndị ọrụ Etourism lere egwu. Dike: icalgụ egwu mere ememe ncheta ncheta 100 nke ọnwụ onye ndu otu onye isi obodo bụ An Jung Geun. Ọ bụ oge dị mma ịnụ ụtọ ndụ ọdịbendị.
Bienvenue au magasin pilote d'Innisfree, ouvert à tous les le-k-mma na nri riri ahụ
Innisfree Logo Connue wunye avoir été la première marque de cosmétique coréen “totalement naturel”, Innisfree s'est metjours distinguée grâce à sa falphie eco-friendly. Bien que je ne sois plus une grande consommatrice de cosmétiques coréens, je mintéresse à l'ensemble des service periphériques liés à cette industri. Storelọ ahịa nchekwa nke Innisfree / Isi iyi nke Innisfree naver…
Ndị hụrụ K-ịma mma ma ọ bụ ndị hụrụ nri n'anya, Nabata n'ụlọ ahịa flagship Innisfree
Innisfree Logo Innisfree bụ otu n'ime amaja K-mara ewu ewu, maka eco-friendly na ngwaahịa okike ya. Ọ bụrụgodi na abụkwaghị m nnukwu onye ahịa ihe ịchọ mma Korea, enwere m mmasị site na ọrụ mpaghara nke ụdị ndị ahụ nwere ike ịnye. Innisfree Flagship Store / Image site n'aka Innisfree naver blog Mgbe m mụrụ banyere Innisfree…
Kedu ka afọ 2018 gị dị? Funlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ihe egwu! Ka anyị lee vidiyo ọnụ !! Have nwere egwuregwu ?? HaHa Ọ bụ afọ obi ụtọ, dịka mkpụrụ osisi cherry, okooko osisi 2 mara mma, na ụbọchị ọmụmụ 🙂 Anyị nwere olile anya na 2019 ga-ejupụta n'ọfulụ na…
[Korea DMC - Etourism] EMITT 2019 na Istanbul
EMITT Istanbul, Turkey 31 Jan, 1-3 Feb 2019 EMITT ka amara dika otu n'ime ihe omume njem di elu na uwa. Ihe ngosi njem nke East Mediterranean International na njem nlegharị anya, na-eme kwa afọ ma mepeere ya ụzọ maka ndị na-azụ ahịa njem na ndị ọhaneze. Etour abanyela na ngosi ma zute ndi njem nleta ihu…
Seoul Vicinity kacha mma 6
1. Adreesị Island Nami Island: 1, Namiseom-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do Nami Island bụ ama maka ụzọ ndị mara mma osisi agbadoro. Agwaetiti a dị ka minit 30 site na Chuncheon na otu awa na-enweghị ogige na mpaghara Seoul. Ebe ọ bụ na adịghị anya na Seoul, ọtụtụ ndị di na nwunye na ezinụlọ na-abịa nleta. 2. Adreesị Petite France: 1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon,…
Oke ihe ngosi 3 Seoul Night
1. Adreesị Gzọ Mbata Gwanghwamun: 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul Gwanghwamun bụ otu n'ime mpaghara mara mma nke Seoul ịga leta n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. I nwekwara ike ịga na iyi iyi Cheonggyecheon, nke dị na-aga ije. 2. Adreesị N-Seoul Tower: 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul N seoul bụ otu n'ime akara ama ama nke Seoul na otu…
[DMC na Korea - Etourism] FITUR 2019 na Spain, Madrid
FITUR Madrid, Spain 23-27 Jan 2019 FITUR bụ ebe nzukọ zuru ụwa ọnụ maka ndị ọkachamara na-ahụ maka njem na ndị isi ahịa azụmaahịa maka ahịa Inbeund na out Iund America. Anyị gosipụtara njem Korea site na nzute na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Korealọ ọrụ ndị njem na Korea - Etourism] MATKA 2019 na Helsinki
MATKA Helsinki, Finland 17-19 Jan 2019 Etourism abanyela na MATKA, ihe omume ụlọ ọrụ njem kachasị na Northern Europe. Anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ njem mere nzukọ.
5 ntụpọ dị ọkụ ileta na Valentine'spo Valentine'sbọchị
1. Adreesị Han River Cruise: 290, Yeouidong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul Kedu maka ụbọchị ihunanya na njem ụgbọ mmiri? Enwere usoro dị iche iche ịhọrọ site na, yabụ họrọ nke masịrị gị. Nwee iren ihunanya! Ọzọkwa, echefula iji ọmarịcha foto nke mpaghara foto. 2. Adreesị Lotte World: 240, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul Lotte World bụ…
4 kachasi arụmọrụ gosipụtara na Seoul
1. Oge NANTA Gosi: Oge 100 Nke Afọ: Onye ọ bụla karịrị ọnwa 12 (Enweghị ụgwọ maka ụmụaka n'etiti ọnwa 12 ruo ọnwa 35 ma enweghị oche ọ bụla. * Nyocha njirimara) Nanta bụ egwu egwu na arụghị arụ nke sitere na arụmọrụ Korea ọdịnala ọdịnala. “Samulnori”. Thelọ ekwu ahụ bụ azụ azụ ya, chefs bụkwa agwa ya. Ndi mma…
Ihe di nkpa nke 5 di elu nke Busan
1. Adreesị Haeundae Beach: Haeundae-gu, ego mbata Busan-si: Ọ dịghị nke Haeundae Beach na Busan bụ onye ama ama na Korea na mba ofesi. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ewu ewu dịka ebe ezumike ọkọchị kachasị, kama ọ na-adọta ndị mmadụ ọbụlagodi oge opupu ihe ubi, ụbịa na udu mmiri maka ememme ya na mmemme ya, dịka Busan International…
Ihe nkpuchi dị mkpa nke 5 dị mkpa nke Gyeongju
1. Adreesị Tomb's Daereungwon King: 9, Gyerim-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do Ntinye ego: Ndị okenye: KRW 2,000 Ndị Ntorobịa: KRW 1,200 :mụaka: KRW 600 Na Daereungwon Tumuli Park Belt dị n'ili na ebe ili ndị mmadụ dị elu gụnyere ndị eze, ndị eze ugwu. Dabere na mpaghara ya dị iche iche, e kewara ya na Tumuli na Hwangnam-ri, Tumuli na Nodong-ri, na…
Ihe Niile M Kwesịrị aboutmara Banyere Korea Cherry Ifuru
Ozi njem2 Comments
Ihe mbụ ị ga-eche banyere oge ọkọchị ga-abụ njem ifuru Udara! Kedụ ka gị na ndị ị hụrụ n'anya na-anọkọ oge ịhụnanya n'oge agba okooko osisi na Korea? Will ga-abụ ọkachamara ọkachamara nke Ifuru cherry na-agụ akwụkwọ a. Ka anyị jiri oge okooko osisi na Korea malite. Anyị agaba! A Korea Nkezi Udara…
Ememe a ma ama na Korea
1. Ememe Azụ Ice Inje Ice Azụ Inje Ice Azụ Inje Ice Fish Inje Ice Fish Ememe Azụ Ice Fish emepeela ekele maka ọtụtụ ndị njem na-esonye na mmasị ha kemgbe 1997. Ọ na-anwa ịnye mmemme dị iche iche na-eso usoro. Ndị ọbịa pụrụ ịnụ ụtọ ịkụ azụ̀ n’ebe a na-eme ememme. Mbido ntanetị: http://www.injefestival.co.kr/korean/index.html Oge ọrụ: 01.26.2019…
Onye nnọchi anya njem Korea - Etourism] ving gafere n'ọfịs ọhụrụ!
N'ụbọchị ikpeazụ nke 2018, Etourism abanyela n'ọfịs ọhụrụ. Ọ dị ya n'anya ịhụ ka ụlọ ọrụ ochie anyị tọgbọ chakoo. ma ugbu a… ọ ga-amasị anyị ịme ọkwa ọfịs anyị ọhụrụ! Nke a bụ ihe mbụ ị ga-ahụ mgbe ị gara na ọfịs anyị. Ihe osise otu Etour nọ n'aka ekpe yana…
Ebe kachasị mma nke 6 iji hụ ọwụwa anyanwụ na Korea
1. Ganjeolgot Ganjeolgot bụ ebe a na-ahụkarị njem nlegharị anya na Ulsan nke ndị obodo hụkwara n'anya. Ebe a dị n'akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ nke Peninsula Korea n'ihi ya, nke a bụ ebe izizi ihu anyanwụ na-awa na Korea. Kwa afọ, ndị mmadụ na-ezukọ ebe a iji hụ anyanwụ na-ebili mbụ nke…
Onye nnọchi anya Korea - Etourism] 2018 IBTM Barcelona, ​​Spain
IBTM World bụ ihe na - eduga mmemme zuru ụwa ọnụ maka nzukọ, agbamume, nzukọ na ihe omume (MICE). Etourism abanyela ihe omume a ma zute ndị ibe ihu na ihu ma nweekwa ohere izute ndị mmekọ ọhụrụ. Anyị nwere oge ịmị mkpụrụ ma nwee olile anya na ndị mmekọ anyị nwere otu ihe ahụ. Anyị nwere olile anya ịhụ gị n’afọ ọzọ!
Ọmụmụ ihe ọmụmụ 2018 K-Wave
21 Nov 2018, K-Wave Destin Seminar Etourism agaala nzukọ ọmụmụ ihe ọmụmụ K-Wave Destition na Malaysia! Ọ dị oke mma ịhụ ka ọtụtụ ndị nwere mmasị na K-Wave. Anyị nwere ọmarịcha oge na Malaysia ma nwee olileanya izute gị ọzọ!
[Korea Travel Agency-Etourism] 2018 Asambodo nke Seoul Asambodo Ogo Njikwa njem
Na 30 Nov 2018, Etourism ka ezigara dika otu n'ime 2018 Best Travel Agency na Korea site n'aka Seoul City. Nke a bụ nke ugboro abụọ ahọrọ Etourism ka ọ bụrụ Agencylọ Ọrụ Nleta Kasị Mma na Korea n'afọ a, nke gara aga na Ọkt 2018 site n'aka KATA. Etourism ga-agbasi mbọ ike ịnye ọrụ kachasị mma ka ndị ọbịa…
Inyocha Ahịa Omenala na Seoul
1. Tongin Market Tongin Market laghachi June 1941, dị ka ahịa ọha guzobere maka ndị Japan bi na mpaghara Hyoja-dong mgbe Korea ka nọ n'okpuru ọchịchị ndị Japan. Mgbe agha Korea gachara, mba ahụ nwere ọnụọgụ nke ngwa ngwa, nke butere mmụba n'okike na agụụ. N'ihi ya…
5 dị mfe ịgbaso Ntụziaka na-eji Ginseng
Oyi Chicken salad na akwukwo Ginseng 1 Chicken ara 1 Green yabasị ½ Kukumba 1 Paprika 1 ½ ngaji shuga 2 ngapa nke Vinegar 1 ngaji nke mmiri ½ Mpekere nke galiki mashed 1 ngaji nke mustard Obere nke Sesame Ginseng wepụ (dabere na ochicho gi) 1. Kwadebe ihe eji edozi ya. Na-asa akwukwo nri na ntu oyi ...
Korealọ Ọrụ Njem Korea - Etourism] WTM 2018 na London
Na Nov 2018 nke a, Etourism abanyela WTM London 2018. Ọ bụ ihe obi ụtọ nzute ndị mmekọ anyị ihu na ihu. Ọzọkwa, anyị nwere nnukwu ohere nzute ndị mmekọ ọhụụ. Anyị na-atụ anya ịhụ gị oge ọzọ!
Mpaghara foto 8 kachasị mma nke Bukchon Hanok Village
8 Akwadoro Foto Foto Bukchon, nke pụtara n'ụzọ nkịtị North Village, bụbu ebe obibi maka ndị ọgaranya na ama ama n'oge Joseon. Ugbu a, obodo abụrụla otu n'ime obodo kwesiri iji gaa na Seoul. Greatzọ kachasị mma iji mee nchọpụta Bukchon ga-esochi ntụpọ foto tụrụ aro 8. Choputa ebe ma mezue…
8 ọtụtụ ebe akwadoro maka ndị okenye ịga na Korea
Ebe njegharị 1. Mt Seorak Site na isi ya kachasị elu, Daecheongbong Peak, nke dị 1,708 m n'elu ala, Ugwu Seoraksan bụ otu n'ime ugwu ndị mara mma na Korea, na-anya isi ọtụtụ okooko osisi mara mma na oge opupu ihe ubi, na-agba mmiri iyi doro anya n'oge ọkọchị, na-amịpụta ụzarị mmiri ọdịda, na odida obodo kpuchiri elu snow n'oge oyi. Na…
8 Ebe a kacha atụ aro ka ezinaụlọ ga-eleta na Korea
Ebe njegharị 1. Ebe a na-ahụ maka ụmụaka ihe ngosi nka nke National Museum nke Korea Museumlọ ihe ngosi nka ụmụaka dị na National Museum of Korea bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie na-ebe ụmụaka nwere ike ịhụ, metụ aka, ma nwee mmetụta akụkọ ihe mere eme site na mmemme na egwuregwu. Ihe ndị a na-adịgide adịgide ma kwe ka ụmụaka mụtakwuo banyere ihe ọdịbendị Korea nwere na mmekọrịta mmekọrịta…
[DMC na Korea - Etourism] ITB Asia 2018 na Singapore
Etourism abanyela na ITB Asia (17-19th Ọkt. 2018) nke emere na Singapore afọ a. Anyị nwere oge na-amị mkpụrụ ebe a na-enwe olile anya izute ndị mmekọ ọhụrụ na ndị ọbịa maka njem Korea.
Asambodo 2018-20 na Nghọta na ngwugwu njem nleta dị mma
Etourism enwetara nkwanye ugwu site n'aka gọọmentị Seoul maka ngwungwu njem dị mma maka 5 Days Korea Muslim Private Tour. Anyị ga-agbasi mbọ ike inye ndị ọbịa na Korea nlegharị anya kacha mma. Nwee obi ụtọ na Korea na ETour!
Ebee ka a na-ewere Drama 'Goblin'?
Jumunjin Sand Arrester Jumunjin Sand Arrester / Image na-enyocha tvN 'Goblin' Ọ nwere ike ịbụ ebe kacha echefu echefu n'etiti ebe dị iche iche na ihe nkiri ahụ maka ọtụtụ ndị na-ekiri ya. Nke a bụ ebe Eun Tak buru ụzọ kpọọ Kim Shin na mberede. Ebe ahụ ghọrọ ebe ama ama mgbe ọdịdị ya…
Ndepụta nke ọdụ ụgbọ elu na South Korea
International AirportDomestic AirportInternational AirportIncheon International Airport (ICN) Adreesị 272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon (인천 광역시 중구 공항 NUM 272) Nkọwapụta Incheon Airport, mepere na March 2001, bụ ọdụ ụgbọ elu kacha ukwuu na Korea ma na-eje ozi dị ka nnukwu ọnụ ụzọ ámá. ebe ha na-aga Korea. Karịsịa, Incheon International Airport họọrọ nọmba nke mbụ maka afọ abụọ site n'ọdụ ụgbọ elu…
Ihe omuma bara uru banyere otu esi eme oku ekwentị na / na South Korea
Koodu South Korea + 82 Otu esi aga na South Korea: + 82 XX XXXX YYYY. “0” na - eduga ada ada mgbe ị na-akpọta South Korea site na mba ofesi. ※ :ma atụ: tokpọ oku maka Etourism / + 82 (Koodu Mba) 2 (Koodu Obodo-Seoul) 323 6850 South Korea City Koodu Obodopollo Seoul (02) Incheon (032) Gwangju (062) Busan (051) Daegu (053) Daejeon…
Eziokwu na-atọ ụtọ banyere ego Korea
Bdị ụgwọ dị puku ise merie / 50,000 merie [o-mmadụ-merie] puku mmadụ iri meriri / 10,000 merie [mmadụ-mmeri] puku mmadụ ise meriri / 5,000 merie [o-cheon-win] Otu puku meriri / 1,000 merie [cheon-ndi mmadu ] Ofdị mkpụrụ ego narị ise meriri / 500 merie [o-baek-win] Otu narị meriri / 100 merie [baek-won] Iri ise meriri / 50 merie [o-sip-won] Ten…
Ndị ọbịa Korea Korea Korea VIP na-eji ọrụ njegharị si Etourism
Onye isi obodo Kuala Lumpur, Tan Sri Datuk Seri Haji Mhd Amin Nordin bin Abdul Aziz gara onye isi obodo Seoul, Park Won-N’oge na-adịghị anya, ikwu okwu maka imekọ ihe ọnụ n’etiti obodo abụọ na 16th Sept 2018 na 10: 20AM KST. Na 17th na 18th, Amin Nordin jiri ọrụ njegharị nkeonwe site na Etourism, mana foto nke ya na-ewere…
10 kacha mma Ga-eleta Ebe nkiri Jeju
1. Seongsan Ilchulbong Peak [UNESCO World Heritage] Nke pụtara “Ilchul” pụtara Ọwụwa Anyanwụ Bekee. Nke a bụ ebe kachasị ewu ewu iji hụ ọwụwa anyanwụ. Nwee obi ụtọ n'otu n'ime echiche iku ume kacha elu. A na-edozi okporo ụzọ na steepụ nke ọma ma ọ dị mfe ịga elu. (Ihe dị ka nkeji 30) Enwere…
Onye nnọchi anya Korea - Etourism] 2018 Seoul International Travel Mart
Etourism sonyere 2018 SITM (Seoul International Travel Mart) na 11th na 12th Sept 2018. Anyị nwetara ohere iji kerịta ndị ozi njem ndị ọzọ. Ọ dị mma izute gị niile na SITM. Anyị na-atụ anya ịhụ gị ọzọ n'afọ ọzọ!
2018 KATA Best Agency Agency na Korea. Etourism
Na 3rd Sept 2018, a họpụtara Etourism dị ka otu n'ime 2018 Best Travel Agency na Korea site n'aka KATA (Korea Association of Travel Agents) Nke a bụ oge nke abụọ ka ahọrọ Etourism ka ọ bụrụ Agencylọ Ọrụ Njem Nleta kachasị mma na Korea, oge mbụ na 2016. Etourism ga-agbasi mbọ ike ịnye ọrụ kachasị mma ka ndị ọbịa…
2018 August, Korea Aglọ Nnọchiteanya Onye Nlekọta njem nleta ọnwa Korea
Anyị na-eri nri abalị ụlọ ọrụ kwa ọnwa Ndị ọrụ na ndị na-eduzi ụlọ ọrụ ahụ nwere ọmarịcha oge :) Ọ bụ nri abalị a na-eme kwa afọ mana ọ nwere oge inye onyinye mmemme nke ntuzi aka kacha mma. Mazị Stephen bụ onye ama ama na oke agụụ dịka onye ndu njem, o tosiri inweta onyinye ahụ.
Nri Koreans kachasị amasị, Ramyeon
A bu nnukwu onye Ramen? Korean Ramen ma ọ bụ Ramyeon bụ onye a ma ama n'etiti ndị bi na ọtụtụ ndị fan na-eto na esenidụt. Ka anyị leba anya n’akụkọ ihe mere eme nke Ramyeon iji ghọta karịa gbasara nri n’onwe ya. A na-eme ka China lamian na Japan na ngwụsị narị afọ 19 na mmalite 20th narị afọ site n'aka ndị China…
Ememe Ọha Korea
Ememe ndị Korea na-adaberekarị na kalenda anyanwụ. Agbanyeghị, ụfọdụ ezumike dị ka ụbọchị Afọ Ọhụrụ nke Korea ma ọ bụ onyinye inye onyinye Korea na-esochi kalenda. Ofbọchị ememme ndị a na - agbanwe kwa afọ. Enwere ohere na ezumike ndị a nwere ike jikọtara ọnụ na ngwụsị izu ma ọ bụrụ na nke a mee, enwere ezumike ndị ọzọ dochie anya imegwara…
Uwe ndị Korea ọdịnala, Hanbok!
Hanbok bụ uwe ndị Korea ọdịnala nke ndị Korea na-eyi kwa ụbọchị ruo naanị afọ 100 gara aga. Hanbok bụ mkpokọ maka 'uwe ndị Korea', mana ugbu a, ọ na-ezo aka na uwe nke oge Joseon. Enweela mgbanwe na Hanbok kemgbe 1,600 gara aga n'ihe banyere agba na…
Onye nnọchi anya njem Korea - Etourism] 2018 Korea Travel Mart maka ndị njem njem
Na 29th May, anyị, onye nnọchi anya njem Korea - Etour tinyere aka na Korea Travel Mart maka ndị njem nọ n'ọtụtụ Korea na anyị gụnyere anyị na ndị ọrụ si Australia, Canada, France, Germany, Russia na USA gara. Anyị nwere mgbako ọsọ ọsọ ọsọ maka nnọkọ nzukọ B2B ma nwee nnukwu oge ịmatakwu ndị mmadụ si…
Korealọ ọrụ Njem Korea - Etourism] 2018 WIT Seoul (Weebụ na Njem)
Anyị sonyere 2018 WIT Seoul na 3rd Apr. Ọ bụ oge bara uru ịmara ahịa njem njem dị ugbu a, ma mụta otú ahịa njem ga-esi agbanwe. Anyị kwesịrị imeghari mgbanwe!
3 / 31-4 / 1 Philippines Comedian Korea Korea
Otu onye ama ama "Mr Roger Pandaan (Ogie Diaz)" na Philippines agaala Korea ma nwee obi ụtọ na njem nleta anyị. Ezinaụlọ Roger nwere mmasị na Everland, Nami Island, Petitt France na ogige nke ụtụtụ dị jụụ. Nwere olile anya ịhụ gị ọzọ na Korea!?
Ememe ncheta omumu nke Amela ~~!
Ndewo onye ọ bụla! N’eche na ị na-enwe ụbọchị ọma ~ ternyaahụ, anyị mere ememme ụbọchị ọmụmụ onye isi Amela! Anyị niile riri achịcha Strawberry dị ụtọ ma gafere oge dị mma ~ ọbụlagodi na ọ lụrụ otu afọ karịa, ọ ka bụ nwa agbọghọ ahụ! Na-achọ ihe niile kachasị mma maka ya ~!
Nri oriri nke onwa nke onwa n’aho n’iru Amela
Anyị na-eri nri abalị n'ụlọ ọrụ maka oriri ehihie Amela. Amela tụụrụ nwa ya nke atọ anyị ga-achọ oriri na ọfụma maka nwa ya nke atọ. Ọ bụ ihe pụrụ iche ka onye ndu njem anyị, Mr Stephen, Mr Kevin na Ms Adella sonyekwara nri abalị. Mgbe ị kekọrịrị ọ joyụ ahụ, ọ…
Onye ọrụ France bụ Kevin ụbọchị ncheta ọmụmụ !!
Nnọọ! Obi dị anyị ụtọ iwepụta onye ọhụrụ anyị Mr Kevin si France! Ọ bụ ihe chiri anya iji soro anyị mee ememe ncheta ọmụmụ 24 ya! Odim n’obi na ọnụnọ ya na Korea ga-enwe obi ụtọ ma bụrụ nke a ga-echefu echefu.
Ndị ọrụ Etourism Nell na-eme ncheta ọmụmụ ụbọchị !!
Ngbako! Taa bụ ụbọchị ncheta Nell onye bụ onye ọrụ njegharị anyị! Anyị gara oriri na nkwari abalị iji mee ya ememe. Obi ụtọ na ụbọchị ọmụmụ Nell!?